Shir Lagu Qiimaynayo Waxqabadkii Xafiiska Caafimaadka DDSI ee 9kii bilood oo ka furmay xarunta deegaanka. - Cakaara News
Shir Lagu Qiimaynayo Waxqabadkii Xafiiska Caafimaadka DDSI ee 9kii bilood oo ka furmay xarunta deegaanka.
Jigjiga(cakaaranews) Sabti, 21ka May, 2016 Waxaa ka fumray madasha shirarka ee xafiiska arimaha haweenka DDSI shir lagu qiimaynayo waxqabadka xafiiska caafimaadka DDSI ee 9kii bilood ee sanad miinaayiyeedka 2008TI waxaa ka soo qaybgalay dhamaan madax xafiiseedyada caafimaadka 68, xidhiidhiyayaasha 9ka gobol iyo shaqaalaha xafiiska caafimaadka ee heer deegaan.
Waxaana furitaankii shirkaasi qiimaynta ah ka hadlay ku simaha wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI ahna agaasinka daawaynta iyo daawooyinka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Nuur Xuseen Xuuble wuxuuna sheegay in . Ujeedada shirkani tahay in si wadajira loo qiimeeyo wax qabadkii xafiiska caafimaadka ee 9kii bilood ee la soo dhafay iyad oo laga duulayo xogta ay soo gudbin jireen degmooyinka, cusbitaalada iyo xarumaha caafimaadka (HMIS) ee xafiisyada caafimaadka degmooyinka iyo gobolada DDSI. Wuxuuna masuulku sheegay in guusha 20ka Ginbood inoo hor seeday in lahelo adeeg caafimaad oo tayaysan loona siman yahay.
Waxaa kale oo ka hadlay agaasinka qorshaynta xafiiska caafimaad DDSI mudane Xasan Ismaaciil oo si qoda dheer u faah-faahiyay ujeedada iyo ahmiyada shirkan wuxuuna sheegay in si cad cadaan ah layskula xisaabtamo waxqabadka. Shirkan ayaa socondoonaa mudo 3maal-mood ah.